‘सहकारीको अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेन’
अन्तर्वार्ता | 2021-07-06 Share
सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य सचिव लीला प्रसाद शर्मालाई फागुन २६ गतेबाट संघीय सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको छ । सहकारी क्षेत्रको शीर्षस्थ नियमनकारी निकायको भूमिकामा रहेको भएपनि विभागले हाल बहुप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका १ सय २५ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था र २० वटा केन्द्रीय सहकारी संघलाई मात्र प्रत्यक्ष नियमन गरिरहेको छ ।
नवनियुक्त रजिष्ट्रार शर्मा विभागसंग भएको श्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर ५० करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको पनि नियमन गर्ने बताउनुहुन्छ । ठूलो कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसंग विज्ञ प्रतिनिधि पठाईदिन अनुरोध गर्दापनि सहयोग प्राप्त नभएको उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । प्रदेश, स्थानीय तह र अभियानसंग समन्वय गरेर आगामी दिनमा बढी भन्दा बढी सहकारीलाई कोपोमिसमा आवद्ध गराउने उहाँको भनाई छ । प्रस्तुत छ रजिष्ट्रार शर्मासंग सहकारी विभागका गतिविधिमा केन्द्रित भएर सहकारी सञ्चार डट कमका सम्पादक हिरा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको सारः
सहकारी विभागमा छोटो अवधिमा धेरै रजिष्ट्रार परिवर्तन हुनेगरेका छन् । कर्मचारीवृत्तमा सहकारीप्रति आकर्षण छैन भन्ने सुनिन्छ । तपाईंले सहकारी क्षेत्र कस्तो पाउनुभयो ?
–म सुनीएको कुराको पछाडि लाग्दिनँ । मेरो मनमा त्यस्तो विचार छैन ।
सहकारी अभियन्ताहरु विभागमा आफू अनुकुलको रजिष्ट्रार आईदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन् । तपाईले उनीहरुको दवावमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमनको जिम्मेवारी र अभियानको दवावबीच कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ ?
–तपाईंको प्रश्न मिलेन । किनभने नेपालको कुनैपनि कर्मचारीलाई उसको पद अनुसार तोकिएका निकाय र पदाधिकारीहरुले निर्णय गरेर सरुवा खटनपटन गर्ने वर्तमान व्यवस्था छ । मलाई यही व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयले निर्णय गरेर रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा पठाएको हो । म यो भन्दा अगाडि उच्चस्तरीय भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्य सचिवकोरुपमा कार्यरत थिएँ । मलाई यहाँ पठाउने सन्दर्भमा तपाईंले जोड्नुभएका विषय पृष्ठभूमिमा थिए थिएनन् भन्ने कुरा जानकारी, अवगत र महसुस भएको छैन । यस विषयमा मेरो थप केही टिप्पणी छैन ।
सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्ने अभियन्ताहरु ठूला राजनैतिक दलका पनि नेता छन् । राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा उनीहरुको पहँुच छ । उनीहरु आफू अनुकुलको ऐन कानुन आउनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । उनीहरुलाई कानुन पालना गराउने काम तपाईंका लागि पनि चुनौतिपूर्ण छ । तपाईंले रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनीहरुबाट कस्तो कुरा आएको छ ?
–सहकारी अभियानमा आवद्ध व्यक्तिहरुले त्यो आवद्धता बाहेक अरु के–के गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको पृष्ठभूमि के हो भन्ने विषय मेरो लागि त्यति महत्वपूर्ण होईन । मौजुदा सहकारी नियम कानुनको परिधि भित्र रहेर मलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो । त्यही जिम्मेवारी र नियम कानुन भित्र रहेर मैले सुरुवाती दिनहरुमा उहाँहरुसंग सहकार्य र समन्वयका लागि छलफल गरेको छु । उहाँहरु सरकारको सर्वोच्च नियमनकारी निकायसंग सहकार्य गरेर सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि अगाडि जान हामी जस्तै हतारिनुभएको छ । राम्रो वातावरण छ । अभियन्ताहरु विभागमा आउनुहुन्छ । म पनि उहाँहरुलाई भेट्न जान्छु । सहकारी क्षेत्रको श्रीवृद्धि र सुधारका लागि संगै मिलेर जाउँ भन्नेमा उहाँहरु एकदम ईच्छुक र सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
सहकारी ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका जारी भईसकेका छैनन् । यो प्रकृयालाई कसरी अगाडि लानुहुन्छ ?
–निर्देशिका तथा मापदण्डहरु मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत हुने कानुनी व्यवस्था छ । म हाजिर हुनुभन्दा अघि आठ नौ वटा निर्देशिका र कार्यविधि जारी भईसकेका छन् । बाँकी तीन चार वटा कानुनी प्रकृया अनुसार मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छन् । राष्ट्रिय सहकारी दिवसका दिन अभियानको समेत अनुरोधमा हामीले माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई बाँकी कार्यविधि छिटो स्वीकृत गर्न अनुरोध गरेका छौं । हाम्रो पहल भनेको मन्त्रालयले थप अध्ययन गर्नु भनेको ठाउँमा अध्ययन गरेर सरोकारवालाहरुसं सुझाव लिएर पठाउने हो । तालुक नियकासंग ‘फलोअप’ र अनुरोध गर्ने काम हो । यो काम हामी गरिरहेका छौं ।
राज्यले जारी गरेको कानुन कार्यान्वयन नभएर पनि सहकारीमा समस्या आउने गरेको छ । कानुन पालना गराउने विषयमा तपाईं कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? निरंकुश बन्नुहुन्छ कि सम्झौता गर्नुहुन्छ ?
–भएका कानुन पालना नगरेका कारणले कुनै क्षेत्र हुनुपर्ने जति विकसित नहुने भन्ने विषय सहकारीमा मात्र होईन हरेका क्षेत्रमा लागू हुन्छ । हरेक क्षेत्र, पेशा, काममा नियम कानुन हुन्छन् । आचारसंहिता हुन्छन् । विधि प्रकृया हुन्छन् । यीनको पालना नगरेकाले तत् तत् क्षेत्रमा हुनुपर्ने जति राम्रो नभएको सबै क्षेत्रमा हुन्छ । यो प्राकृतिक विषय हो । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भएको समय धेरै भयो भन्न मिल्दैन । अर्को विषय, लोकतान्त्रिक मुलुकमा निरंकुश भएर कानुन कार्यान्वयन गराउने भन्ने पनि हुँदैन । र, कानुनी साशनमा सम्झौता गरेर जाने भन्ने पनि हुँदैन । यी तपाईंका मौलिक शब्द हुन् । तपाईंले भावनामा बगेर यी शब्द भन्नुभयो । न निरंकुशतातर्फ गईन्छ, न सम्झौता हुन्छ, नियममा जे भनेको छ अक्षरशः त्यही हुन्छ ।
सहकारी विभाग मातहतका डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएकाले अहिले हामीसंग एकदमै न्यून जनशक्ति छ । तरपनि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, ९९ सय दशमलव ५ प्रतिशत सहकारीको नियमन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका तालुक निकाय, मिडिया, ७३ लाख सहकारीकर्मीका प्रतिनिधिहरु सबैलाई समेटेर, विभागमा उपलब्ध साधन श्रोतलाई मिलाएर बढी भन्दा बढी उपलब्धिमूलक हुनेगरी अनुगमनलाई अगाडि बढाउँछौं ।
संघीय सहकारी विभागले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीलाई नियमन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
–मिल्छ । तर कानुनी आधार चाहिन्छ । दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको सहकारी विभागको प्रत्यक्ष नियमनमा पर्छ । अहिले १ सय २५ वटा संस्था र २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरु गरेर १ सय ४५ वटा सहकारी हाम्रो प्रत्यक्ष नियमनमा छन् । यो बाहेक, ५० करोड वा सो भन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय पाटोमा नियमनको नेतृत्व गर्ने काम अझै सहकारी विभागको जिम्मेवारीमा पनि छ । पनि किन भनिरहेको छु भने, यी संस्थाको प्राथमिक नियमन गर्ने जिम्मेवारी तत् तत् पालिका र प्रदेश सरकारको हो । हामीले पनि आवश्यकता, जनशक्ति आदि कुरालाई विचार गरेर एक्लै वा उहाँहरुलाई लिएर नियमन गर्न मिल्छ ।
सरकारले प्रयोगमा ल्याएको पाँच वर्षमा पनि सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
–यो प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको रहेछ । म पनि बुझ्दै छु । त्यसअघि मन्त्रालयमा रहेको यो प्रणाली परीक्षणकोरुपमा मात्र रहेछ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट मात्र आंशिकरुपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको रहेछ । यसमा अहिले साढे ६ हजार देखि ७ हजार जति सहकारी आवद्ध भईसकेका छन् । हामी प्रदेश, स्थानीय तह, विभागका कर्मचारी, स्वतन्त्र व्यक्तिहरु लगायत सबैलाई परिचालन गरेर यो संख्या बढाउन लागिपरेका छौं । कोपोमिसमा सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो साधारण सभा सम्पन्न गरेपछि जे–जे कागजपत्रहरु नियामक नियकामा बुझाउनुहुन्छ, तीनै कागजपत्र र कारोबारको विवरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट पठाउने हो । यो प्रणाली उहाँहरुको सजिलोका लागि हो ।
हामीले उहाँहरुलाई बुझाउन नसकेको हो जस्तो लाग्छ । सीमित जनशक्ति भएकाले उहाँहरुलाई दिनुपर्ने जति प्राविधिक तालिम पनि दिन सकिरहेका छैनौं । हामीले ईच्छा हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकेका विषयलाई सुधार गरेर आगामी दिनमा बढी भन्दा बढी सहकारीलाई कोपोमिसमा आवद्ध बनाउँछौं । यसका लागि मैले महासंघसंग पनि समन्वय गरिरहेको छु । यसलाई लागू गराउन सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघहरु र सबै सहकारीको इमानदार प्रयास हुनुपर्छ । उहाँहरुको सक्रिय सहयोगको आशा राखेको छु ।
सहकारी विभागले हालै सार्वजनिक गरेको सहकारीको तथ्याङ्कको विश्वसनीयता माथि सन्देह प्रकट भएको छ । यसलाई पूर्णता दिन कहिले संशोधन हुन्छ ?
–सहकारी विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा विश्वनीयताको कमी र सन्देह गर्न हुँदैन । राज्यको निकायले बनाएको हो । शंका नगरौं । विश्वनीयतामा प्रश्न र शंका गर्न पाईएन । प्रतिकूल अवस्थामा तथ्याङ्क संकलन गरेकाले यसमा केही छुट भएको छ । छुट भएको कुरालाई मिलाउँ । यो प्राविधिक समस्या हो । विश्वसनीयता र शंकाको प्रश्न होईन । मैले सहकारी दिवसका दिन पनि कुरा राखेको थिएँ । हामी ३० हजार सहकारीले ८८ हजार जनालाई रोजगारी दिएका छन् भनिरखेका छौं । यसलाई आधार मान्दा एउटा सहकारीले ३ जनालाई पनि रोजगारी दिएको छैन । त्यसैले यसलाई धेरै कोणबाट मिलाउनुपर्ने देखिएको छ ।
कोरोना महामारीको स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय, स्थानीय तह, महासंघ सबै मिलेर तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्छ । तथ्याङ्क कहिले पनि सय प्रतिशत आउँदैन । दुई देखि तीन प्रतिशत ‘स्टाटिस्टिकल एरर’ मान्ने चलन छ । तरपनि हामी उचित विधि अपनाएर सय प्रतिशतको नजिक हुनेगरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने तयारीमा छौं । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी उहाँहरुसंग केही समयपछि सहकारीको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नीतिगत व्यवस्थापन र अनुगमनमा के–कस्ता समस्या छन्, कस्ले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा सम्मेलन गर्दैछौं । मलाई पनि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम छिटो गर्नपाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन पालना गर्न सहकारी तत्पर देखिएका छैनन् । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि गुनासो छ । यसलाई कसरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
–सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा कानुनले विभागलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ । विभागबाट निर्देशिका पनि जारी भएको छ । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजन्य गतिविध भएको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हामीबाट तथ्याङ्क जानकारी माग गरेर अनुसन्धान गर्ने हो । हामी प्रधान निकाय होईनौं । यसमा हाम्रो भूमिका सीमित छ । तर फेरि कुरा कोपोमिसमा जोडिन्छ । सहकारीले आफ्नो कारोबारको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई तीस पैंतीस हजार सहकारीमा आवद्ध भएका अमुक व्यक्तिले गरेको कारोबारबारको विवरण कुन ढड्डा पल्टाएर उपलब्ध गराउनु ?
कोपोमिसमा आवद्ध भएका सात हजार सहकारीबाट पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणजन्य जानकारी पूर्णरुपमा आएको छैन । त्यसैले म तपाईंहरुको सञ्चार माध्यम मार्फत सबै सहकारीकर्मीहरुलाई कोपोमिसमा जोडिन अनुरोध छ । अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकसंग हाम्रो पनि गुनासो छ । हामीले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्दा सहभागिताका लागि राष्ट्र बैंकलाई पनि अनुरोध गरेर पत्र पठाउने गरेका छौं । तर राष्ट्र बैंकबाट कोहीपनि सहभागी नभईदिने अवस्था छ । वित्तीय विषयको विज्ञ निकाय राष्ट्र बैंक हो । हामी उहाँहरुको विज्ञताको लाभ लिन्थ्यौं, सिक्थ्यौं । त्यसैले केही अनुगमनमा उहाँहरु आईदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि गुनासो छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ओरियन्टल सहकारीको फाईल विभागलाई बुझाएको छ । विभागले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?
–सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि समितिले ओरियन्टल सहकारीको छानविन प्रकृया रोकेको हो । विभागलाई जिम्मा दिएको होईन । अव विभागले यसो गर्ने भनेर निर्देशन प्राप्त भएको छैन । फाईलहरुपनि प्राप्त भएको छैन । ओरियन्टलको विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिहरु हामीकहाँ आएर अव यसमा के गर्ने भनेर गुनासो पनि गरिरहनुभएको छ । त्यो गुनासोबारे मन्त्रालयमा अनुरोध पनि गरेका छौं । मन्त्रालयबाट आजका मिति (२०७७ चैत २७ गते) सम्म ओरियन्टलका विषयमा सहकारी विभागले यो–यो गर्नु भनेर औपचारिक निर्देशन आएको छैन ।
मुलुकमा अधिकांश सहकारी वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित भएका छन् । उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, उपभोत्ता, सेवा आदि क्षेत्रमा कमै मात्र लागेका छन् । तपाईं यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
–मलाई यसमा मूर्त उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ । मुलुकको संविधानले राज्यको अर्थतन्त्रका तीन वटा खम्बा मध्ये एउटा खम्बा सहकारीलाई मानेको छ । राज्यले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर ऐन नियममा नरम नीति बनाईसकेको अवस्थामा यो प्रकृतिका यति मात्र संस्था हुनुपर्छ भन्न नमिलेर पनि संस्थाहरु बढी भए । मौलिक हकले पनि संघ संस्था खोल्न पाउने सुनिश्चित गरेको छ । सहज धरातलमा धेरै सहकारी आए । आउनु नराम्रो होईन । आर्थिक गतिविधहरु बढ्नुपर्छ । अव वाञ्छित दायरामा लानका लागि त राज्य र अभियान मिलेर ट्रयाकमा हिँडाउनु पर्छ । सहकारीलाई बढी भन्दा बढी उत्पादमुखी, रोजगारमुखी, राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदानमुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सिंगो सरकारले उच्च नीति बनाउनुपर्छ । त्यो नीति हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो ।
सहकारीलाई उत्पादनमा संलग्न गराउन ल्याईएको मुख्य कारोबारको व्यवस्था अधिकांश सहकारीले पालना गरेका छैनन् । यो पालना गराउने जिम्मेवारी त विभागको हो नि ?
–यो व्यवस्था किन पालना भएन, के गर्दा पालना गर्छन भन्ने विषयमा मैले छोटो समयमा अनौपचारिक जानकारी लिएको छु । सहकारी मन्त्रालय, महासंघ र विभागले सहकारी ऐन, २०७४ मा नमिलेको जस्तो लागेका, भनिएका, मानिएका, ठानिएका र अव्यवहारिक लागेका विषयहरुलाई मिलाउन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । मन्त्रालयको निर्देशनमा महासंघ र हामी वसेर यसलाई वस्तुगतरुपमा विश्लेषण गरेर अगाडि जाने वातावरण बनाउँछौं ।
हामीले यो अन्तर्वार्ता सहकारी सञ्चार मासिकको बैशाख अंकबाट लिएका हौं ।– सम्पादक
जेठ २९ र ३० गते चौथो साकोस शिखर गोष्ठी हुने: सहभागी दर्ता फाराम खुला
पोखरामा दुई सहकारीको संयुक्त रक्तदान कार्यक्रमः ६२ युनिट रगत संकलन
कोअपरेटिभ मेनेजर्स क्लब, काभ्रेको प्रारम्भिक साधारणसभा: अध्यक्षमा मदन बस्नेत
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई
सत्तासीन चार दलको घोषणापत्रमा सहकारीः जनता समाजवादीले सहकारीको नामै लिएन
कोपोमिसमा आवद्ध नभएका सहकारीले सरकारी अनुदान नपाउने, करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि जारी नहुने
सहकारी सञ्चार टिम
सुशिल चौधरी ९८५१०८५३४९
हिरा बस्नेत ९८५११४३२७९
मान बहादुर के.सी.
© 2020 @ SahakariSanchar.com. All rights reserved.
Developed by Artificial Info Tech Pvt Ltd